GeoZilla အားဖြင့်မိသားစု GPS တည်နေရာ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » GeoZilla အားဖြင့်မိသားစု GPS စနစ် Locator
GeoZilla APK ကိုအားဖြင့်မိသားစု GPS စနစ် Locator
Invite နှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူသင့်တည်နေရာကိုမျှဝေပါ။ ကမြေပုံပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကာလ၌သူတို့ဘယ်မှာ သိ. မှကြွလာသောအခါ GeoZilla အသက်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။
- အလွယ်တကူသင်၏ဖုန်းအတွင်း GPS စနစ် tracker တွင်သုံးပြီးမိသားစုနေရာချထား
- သင်လုံခြုံဖြစ်ကြောင်းမိသားစုအာမခံအတွက် Check
- မိသားစုဝင်များမှတည်နေရာ-based တာဝန်များကိုသတ်မှတ်
သိသိသာသာတည်နေရာပြောင်းလဲမှု (SLC) ၏အသုံးပြုမှုကိုသင်သိသိသာသာဖျန်ကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ GPS စနစ် tracker စောင့်ရှောက်ဖို့မြေပုံပေါ်တွင်ပြောင်းရွှေ့မှီတိုငျအောငျမိသားစု Locator အိပ်ပျော်ခြင်း mode မှာဖြစ်ပါတယ်သေချာ။
ကလေးတွေသူတို့အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အချိန်မီရောက်လာပါလျှင်သိရန်ကျောင်းမှနေရာဖြစ်သည်စွန့်ခွာတဲ့အခါမှာအကြောင်းကြားဖို့မိသားစု Locator app ကိုအသုံးပြုပါ။
ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း GeoZilla မိသားစု Locator သင်သည်သင်၏ကလေးတွေကို '' ဘယ်မှာစစ်ဆေးခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေကြကုန်အံ့, အဘယ်သူမျှမဟာသဖြစ်ပါတယ်။ GeoZilla GPS စနစ် tracker တွင်၎င်းတို့၏အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို Add သူတို့သည်သင့်အကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်ပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ရဲ့တည်နေရာအချက်အလက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု tracker app ကိုတစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုများသူတို့တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရကြမည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုခစျြနှင့်အတူသူတို့အဘို့အကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်ချစ်တဦးတည်း GeoZilla မိသားစု Locator နှင့်အတူသင် GPS စနစ် enabled အခါအိမ်ကနေမှသင်၏ချစ်ရသူလုံခြုံများမှာအချို့သောဖြစ်ခြေရာခံကြပါပြီဟုသိမှတ်နည်းနည်းပိုမိုလွယ်ကူငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်သည်, အန္တရာယ်ကင်းလျှင်နောက်တဖန်အစိတ်မပူပါနဲ့ဘယ်တော့မှမ။
အရေးကြီး: တည်နေရာခွဲဝေမှုရွေးချယ်-in ကိုသာ, ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ GeoZilla အသုံးပြုသောခံရဖို့အားလုံးမိသားစုဝင်များထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
GeoZilla အောက်ပါ optional ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုမှုများကိုလိုအပ်သည်:
သင်၏စက်ဝိုင်းကို join ဖို့အခြားအသုံးပြုသူများကိုရှာဖွေ•ဆက်သွယ်ရန်,
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုဝေမျှပေးပါ: support@geozilla.com ။
သင့်မိသားစုရဲ့ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ Update ကို GeoZilla တွင်နေထိုင်ကြသည်။ support@geozilla.com မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တုံ့ပြန်ချက်မျှဝေပါ။
GeoZilla အားဖြင့်မိသားစု GPS စနစ် Locator
26.30 ကို MB